wararka maanta-arlaadii.net » 2018 » April » 13
Labo wafdi oo ka socday Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS, Guddiga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka ee Labada Aqal iyo Guddiga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa maanta kala gaareen magaalooyinka Kismaayo ee caasimadda ku-meel-gaarka ah ee dawlad...
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka qaadis ku sameeyay Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan, kadib warqad ka soo baxday xafiiskiisa. Guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Cali Jeyte Cusmaan, waxaana lagu bedelay Guddoomiye cusub oo lagu...
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dil xalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, kaasi oo ay geysteen laba Dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa Bastoolado, kana tirsan ururka Al-shabaab, sida ay sheegeen Hay’daha ammaanka. Masuulka la dilay oo lagu magacaabi...
Dallada Bulshada Rayidka ah ee SOSCENSA oo ay ku mideysan yihiin inta badan Ururada Bulshada rayidka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay kaga hadashay khilaafkii Baarlamaanka ee dhamaaday iyo Guddoomiyaha cusub ee la soo dooranyo, sidoo kale waxay baaq u dirtay...
Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federalka Somaliya ayaa waxa ay sheegtay in isbedel lagu sameeyay qorshaha amniga guud Magaalada Muqdisho ee caasimadda Somaliya. Wasiirka Amniga Somaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa waxa uu sheegay isbedelka la sameeyay inuu yahay in la...
Qarax dhimasho iyo dhaawac dhaliyay ayaa galabta ka dhacay Garoon Kubadda Cagta lagu cayaaro oo ku yaalla bartamaha degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose, kaasi oo uu ka socday tartan kubadda Cagta ah. Qaraxan ayaa nuuciisa wuxuu ahaa Miinada dhulka lagu aaso waxaana la...
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa lacag dhan shan iyo toban kun oo lacagta Mareykanka ($15,000) guddoonsiiyay Sarkaal dhawaan ka soo goystay Ururka Al Shabaab, ka dib markii uu wada hadal la bilaabay Maamulka. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Aadan (Sandheere) ayaa bishii...